RASMI: Iibkii AC Milan oo jid cusub qaaday! (Sharikaddii SES oo gebi ahaanba mid cusub lagu bedeley & waqti cusub oo loo qabtay saxiixa) – Gool FM
(Milano) 25 Maarso 2017 – Hoowsha iibka AC Milan “waa la dhamaystiray” saxiixa kama dambaysta ihina wuxuu dhici doonaa 14-ka Abriil, ayaa lagu xaqiijiyay war kasoo baxay sharikadda uu leeyahay Silvio Berlusconi ee Fininvest.
Yonghong Li ayaa si rasmi ah albaabada iskugu dhuftay Sino-Sports Europe (SES) isagoo wixii lacag ah u wareejiyay sharikadda Milan maamuli doonta ee Rossoneri Sport Investment Lux, oo uu saldhigeedu yahay Luxembourg.Fininvest ayaa fiidkan caawa soo saartay war ay ku sheegayso in “Rossoneri Sport Investment Lux ayaa dib u saxday heshiiskii labada dhinac iyadoo gacanta ku haysa dhamaanba lacagaha loo baahan yahay si heshiiska loo dhamaystiro.
“Kaddib falanqayn qoto dheer, waxaa laga shaqeeyay qaab dhismeed cusub, kaasoo gebi ahaanba bannaanka ka ah Shiinaha, si lacagaha harsan loogu guulaysto in lasoo waarido.” ayaa lagu bilaabay warka.
“Sharikad cusub ayaa SES howsha kala wareegtey taasoo la yiraahdo Rossoneri Sport Investment Lux, oo uu maamulo Yonghong Li.
” ayaa la raaciyay.Qorshaha iibka AC Milan ayaa dhowr jeer dib u dhacay horraan kaddib markii ay dowladda Beijing ay miinka ka cuskatay in malaayiin lacag ah dibedda looga bixiyo dalkaas China, gaar ahaan maalgelinta isboortiga, haatan oo uu iibka Milan kusoo haray Yonghong Li, waxaa lagu wadaa in heshiiska kama dambaynta ah la saxiixo 14-ka bisha soo aaddan ee Abriil, balse weli mad madoow badan ayaa u muuqda taageerayaasha Milan.
RASMI: Macallin Salaad oo iska casilay xilkii tababaranimo ee kooxda Jeenyo